बुढा विदेश हुँदा अरु संगै भाग्ने ? कमलाको दोहोरि बन्यो भाइरल - भिडियो - Articles Nepal
बुढा विदेश हुँदा अरु संगै भाग्ने ? कमलाको दोहोरि बन्यो भाइरल – भिडियो
Articles Nepal September 5, 2019 0
नेपाल विश्वकै एउटा यस्तो देश हो जहाँ अनेकौं प्रतिभा र प्राकृतिक स्रोत साधानहरु रहेका छन। नेपालको गाउँ गाउँ र कुना कुनामा लुकेर रहेका त्यस्ता प्रतिभाले अहिले ठाउँ पाउँदै छन। अहिले लुकेर रहेका त्यस्ता प्रतिभाहरु बिभिन्न मिडियामा आफ्नो स्थान पाउने गरेका छन। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने अशोक दर्जी, समिक्षा अधिकारी, मनिष लिम्बु, केहर लगायतका प्रतिभाहरु हरु ।
त्यस्तै यतिबेला हिजो आज एकजना बालिका मिडियामा भाईरल भई रहेकी छिन। कमला घिमिरे नामकी ति बालिका अहिले एकाएक मिडियामा छाईरहेकी छिन। उनले नेपालका चर्चित गाएकहरु संग पनि सजिलै दोहोरि फर्काउन सक्ने कला उनमा रहेको छ। उनको कला र प्रतिभालाई अहिले सबैले मन पराएका छन। हेर्नुहोस यो भिडियो।
Previous Post: ११ वर्षिया भाइरल नानी अब इन्द्रेणीमा – भिडियो
Next Post: प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्किने